छैन सिटामोल, फार्मेसीमा जाँदा रित्तो हात - samayapost.com
पत्रपत्रिका २०७८ माघ ७ गते ७:३९
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुको गेटमै रहेका शुक्र फार्मेसी, रेमिडियन फार्मेसी र शास्त्री फार्मेसीमा पनि सिटामोल पाइएन। एक युवती हतारहतार शास्त्री फार्मेसीमा पसिन्। उनले सिटामोल माग्दा व्यवसायीले डाक्टरको प्रेस्क्रिस्पन मागे। फार्मेसी सञ्चालकले दुई सातादेखि सिटामोल नआएको बताएन। ‘सयांै आउनुहुन्छ कहाँबाट पुर्‍याउनु ? डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन भएकालाई एक/एक पत्ता दिने गरेका छौं’, उनले भने।
सोविका मेडिकल हल महाराजगन्जकी प्रतिभा हाडाको फार्मेसीमा पनि सिटामोल नभएको दुई साता भयो। भनिन्, ‘भएर नदिन त कसलाई मन हुन्छ र ? कोही–कोही त सिटामोल मिसिएको अरू औषधि भए पनि दिनु न भन्छन्। के गर्ने ?’
दिनमा २ सयभन्दा बढी ग्राहक सिटामोल खोज्न आउने गरेको चामुण्डा फार्मेसी सिनामंगलका माधवप्रसाद घिमिरेले बताए। ‘सिटामोल अभाव हुनुको कारण अहिलेको कोभिड हो। भाइरल ज्वरो साथै मौसम चेन्ज भएको कारण पनि कोभिड बढिरहेको छ’, उनले भने, ‘यसको सामान्य औषधि नै सिटामोल हो। धेरै जनालाई त सिटामोल खाएरै कोभिड निको हुन्छ। सिटामोल जुनसुकै अवस्थामा पनि चाहिन्छ। ज्यान दुखेदेखि लिएर घाँटी, टाउको, ढाड दुखेको बेला पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।’ आजको अन्नपूर्णपोष्ट् दैनिकमा यो समाचार छ ।